| ५:२२:५४ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७७ साल माघ १५ गते । बिहीबार इ.स.२०२१ जनवरी २८ तारिक । शकसंवत् १९४२ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । नेपाल संवत् ११४१ । पौष शुक्लपक्ष । तिथी– पूर्णिमा,२४ बजेर ५१ मिनेट उप्रान्त प्रतिपदा । नक्षत्र–तिष्य,२८ बजेर २० मिनेट उप्रान्त अश्लेषा । योग–प्रिती,२० बजेर ०२ मिनेट उप्रान्त आयुष्मान । करण–भद्रा,१२ बजेर ५५ मिनेट उप्रान्त बव,२४ बजेर ५१ मिनेट उप्रान्त बालव । आनन्दादिमा–शुभ योग । चन्द्रराशि–कर्कट । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ५४ मिनेटमा,सूर्यास्त १७ बजेर ३९ मिनेटमा । दिनमान २६ घडी ५४ पला । पूर्णिमाव्रत,श्रीस्वस्थानीव्रतप्रारम्भ,माघस्नानप्रारम्भ, भ.पु. हनुमत्तीर्थ त्रिवेणीमेला,चाँगुनारायण हैंगुमलापून्हि ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):- मायाप्रेममा बिश्वास सिर्जना हुनेछ भने घर परिवारमा आमासँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ । अन्य काममा व्यास्त हुँदा पढाइ लेखाइ कमजोर रहनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा सहभागी हुनेहरुले जनतासँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला । स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला छाती सम्बन्धी समस्या आउने तथा खर्च बढ्ने योग रहेकोछ । तरपनि कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समय लगानी गरी भनेजस्तो आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- गलत लेखाई अथवा गलत बुझाईलो आाफ्नो साख गिर्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिने भएपनि वढि नै उत्साहित हुन खोज्दा नराम्रो घट्न घट्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यवसायमा लगानी गरे पनि नाँफा कमाउन बढि नै समय खर्चनु पर्नेछ । मायाप्रेममा मनमुटाव सिर्जना हुने भएपनि अन्तत एक अर्कालाई विश्वास गर्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ ।
मिथुन ( का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- विचारमा आउने परिवर्तनले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । तपाईको बोलिको सबैले कदर गर्नेछन् । व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा आर्थिक अवस्था सुदृड हुनेछ । आफन्त तथा कुटुम्बसँग बसेर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आफ्नो सञ्चित सम्पतिको प्रयोग गरी आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला पार्न सकिनेछ । गित संगितमा लाग्नेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ ।
कर्कट ( ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो):- नयाँ प्रबिधिको प्रयोग गरि रचनात्मक कार्य गर्न सकिनेछ । राजनीति कर्मीहरुका लागी जनताको काम समयमा गर्न सकिने हुनाले पद प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ । बिद्यार्थी वर्गहरुका लागी मेहनेत गरी अध्ययन गर्दा उत्कृष्ट नतिजा हात पार्ने योग रहेकोछ । सुन्दर तथा बिलाशिताका सर सामान प्रयोग गरी अरुको ध्यान आफुतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । लामो समयदेखी बिछोड भएका मित्रहरुसँग भेट हुनाले दिन रमाईलो गरी बिताउन सकिनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे):- सामान्य काममा अल्झने समय रहेकोछ । अरुकै काम गर्दा आफ्नो काम थाती रहनेछ । पढाईलेखाईमा समय दिन सकिने छैन भने नतिजा अरुतिरै जानेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आई पर्नेछ भने औषधी उपचार खर्च बढेर जानेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउनेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय मध्ययम रहेकोछ । तरपनि विदेशी सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ ।
कन्या ( टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) :- समय मध्यम रहेकोले व्यापारमा लगानी गर्नको लागी केही समय पर्खनु नै राम्रो हुनेछ । दाजुभाई तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग नहुने हुनाले काम गर्न नसके जस्तो हुनेछ । सत्रु,मुद्दा मामिला तथा अन्य झन्झटबाट मुक्ती मिल्ने समय नरहेकोले ख्याल गर्नुहोला । मायाप्रेममा मनमुटाव बढ्न सक्छ । सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक सम्पतिहरु प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला । पढाईलेखाई तपाई आफ्नै कमजोरिले बिग्रनेछ ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते ) :- नोकरी तथा जागिरमा आफ्नै कमजोरीले समस्या आउनेछ । कार्यक्षेत्रमा काम बिग्रने हुदा आलोचना गर्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । व्यापार व्यवसाय खस्केर जाने हुनाले आर्थिक अवस्था बिग्रनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्दा ईज्जत प्रतिष्ठामा कमी हुनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिससँग बिवाद हुनेछ भने सरकारी सेवामा रहेर काम गर्नेहरुले बिशेष ध्यान दिनुहोला ।
बृश्चिक ( तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू ) :- सामाजिक काम गरि समाजमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । पढाईलेखाईमा सुधार भएर जाने तथा आफन्तहरुलाई खुशि पार्न सकिनेछ । आफ्नो रितिरिवाज जोगाउने काममा समय खर्च हुनेछ भने तिर्थ यात्राको प्रसस्त सम्भावना रहेकोछ । व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाई प्रसस्त नाफा कमाउने समय रहेको छ । प्रेम प्रशङगमा रमाउन चाहनेहरुका लागी दिन उत्तम रहेकोछ ।
धनु ( ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे ): – आफन्त तथा चेलि माईती बीच बैमनस्यता बढ्ने ग्रहयोग रहेकोछ सचेत रहनुहोला । व्यापार व्यवसायमा समय दिन नसक्दा घाटा लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । मायाप्रेममा धोका हुनेछ भने दाम्पत्य जीवनमा घटपट आउनेछ । समय तथा परिस्थिति अनुशार नचल्नाले दुख पाईनेछ । सामान्य स्वास्थमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ । पढाईलेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछी परिने चिन्ताले सताउनेछ ।
मकर ( भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- नयाँ सवारीसाधन तथा मन परेको भौतिक सम्पती जोड्ने समय रहेकोछ । सामुहिक लगानी कर्ता भेला पारी सुरु गरिने व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा भनेजस्तो रुपैया पैसा कमाउन सकिने तथा जीवनस्तर सहज रुपमा अगाडी बढाउन सकिनेछ । पारिवारिक यात्राका क्रममा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । मायाप्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पतिपत्नी बीच मायाको डोरो कसिलो हुनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा ):- स्वास्थ्यमा समस्या देखिने हुुनाले दौडधुपमा समय खर्च नगर्नु नै राम्रो रहेकोछ । काममा ढिला शुस्ति,बैरभाव तथा आफन्तसँग विवाद हुने योग रहेकोछ । कार्यक्षेत्रमा कामको भार बढ्नेछ भने पदोन्नती तथा नया काम पाउने योग केही दिनको लागी टरेर जानेछ । खुट्टा तान्ने तथा काममा विवाद सिर्जना गर्नेहरु सक्रिय रहनेछन् । पढाइ लेखाइ अधुरै रहनेछ भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईँको विपक्षमा फैसला हुनेछन् ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची):- लामो समयदेखी थाती रहेको काम बन्नेछ भने बिभिन्न अवसरको सदुपयोग गरी मनग्गे धन तथा सम्पति संग्रह गर्न सकिनेछ । आर्थिक मुद्दाहरु हल भएर जानेछन् भने मित्रहरुको सहयोग रहनाले सकयमा कामहरु बन्नेछन् । पढाईलेखाईमा पहिले भन्दा सुधार भएर जानेछ भने अली बढी मेहनेत गर्दा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । भौतिक सम्पति तथा बिलाशी वस्तुको प्रयोग गर्न पाईने हुँदा मन प्रफुल्ल हुनेछ । अध्ययनको शिलशिलामा यात्रा गर्न सकिने समय रहेको छ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
तपाईको जेठ महिनाको राशीफल कस्तो छ ? ९ घण्टा पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ? ९ घण्टा पहिले
बिदुर नगरपालिकाद्वारा त्रिशूली अस्पताललाई दुई थान भेन्टिलेटर उपलब्ध ६ मिनेट पहिले
तिब्बततर्फबाट सगरमाथा आरोहणमा अस्थायी रुपमा रोक १६ मिनेट पहिले
काभ्रेपलाञ्चोकमा दैनिक डेढसय संक्रमित हुन थाले २० मिनेट पहिले
नेपाल लाइफको ‘नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना’ सार्वजनिक २६ मिनेट पहिले
स्वयंसेविकाले जोखिम भत्ता पाएनन् अझै ५१ मिनेट पहिले
वीरको नयाँ भवन अक्सिजन अभावले सञ्चालनमा कठिनाइ ६० मिनेट पहिले
अरुण भ्यालीको हकप्रदमा आवेदन दिन आइतबार अन्तिम दिन ५ घण्टा पहिले
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने २३ घण्टा पहिले
कोभिड नियन्त्रणमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु : गृहमन्त्री थापा २१ घण्टा पहिले
निषेधाज्ञा थपियो: मेयर चढ्ने गाडी कोरोना नियन्त्रणमा ६ घण्टा पहिले
प्रम ओलीलाई बधाई तथा शुभकामना २१ घण्टा पहिले
विभिन्न ग्यारेज र वर्कशपबाट ग्यास सिलिण्डर जफत ५ दिन पहिले
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सर्किट लेबलमा कारोबार, प्रतिशेयरमूल्य १९ हजार बढि ५ दिन पहिले
लघुवित्तको ४ लाख ५५ हजार कित्ता संस्थापक शेयर लिलामीमा, प्रतिकित्तामूल्य ४ सय १६ रुपैयाँ २ दिन पहिले
महाप्रबन्धक पौडेलको नेतृत्वमा नेपाल एयरलाइन्स सुधारतर्फ अग्रसर, एक निर्णयले जोगियो डेढ अर्ब ४ दिन पहिले
ज्यानमारा भाइरसले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रेष्ठको मृत्यु २ दिन पहिले
ओली प्रभावशाली नेताहरुलाई तान्ने रणनीतिमा ३ हप्ता पहिले
पालिका मुकाममै सडक साँघुरा ३ हप्ता पहिले
लागूऔषध ओसारपसार गर्ने दुई भारतीयसहित चार पक्राउ ५ दिन पहिले
पाँच करोड लागतमा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण ४ दिन पहिले
देउवा निवास पुगे प्रचण्ड २ दिन पहिले
भारतबाट फर्केकाको परीक्षण नहुँदा संक्रमण फैलिने त्रास १ हप्ता पहिले
आज विश्व पृथ्वी दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै २ वर्ष पहिले
देशभरी छरिएर रहेका अभिकर्ता नै हाम्रा ब्राण्ड एम्बेस्डर हुन् : सीईओ झा १ वर्ष पहिले
यस वर्ष इन्द्रजात्रामा भीडभाड रोकिने ९ महिना पहिले
सामान्य विवादमा प्रहरीको बल प्रयोग भन्दै कांग्रेसले निकाल्यो विज्ञप्ति १ वर्ष पहिले